प्रधानमन्त्री ओली आराम गर्न सिंगापुर जाँदै | नेपाली पब्लिक प्रधानमन्त्री ओली आराम गर्न सिंगापुर जाँदै | नेपाली पब्लिक
नेपाली पब्लिक २०७६, १५ श्रावण बुधबार ०७:२२
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आराम गर्न १८ गते सिंगापुरतर्फ जाने भएका छन्। निकटस्थ र चिकित्सकले केही दिन आराम गर्न सल्लाह दिएकाले प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर जान लागेका हुन्। एक साताको सिंगापुर बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य परीक्षण पनि गराउनेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहका अनुसार दैनिक कार्यसम्पादनका कारण धपेडी बढेकाले उनलाई आरामको जरुरत छ। केही दिन आराम गर्न र स्वाथ्य उपचारका लागि प्रधानमन्त्री सिंगापुर जान लागेको उनले बताइन्। ‘दैनिक कार्यसम्पादनमा धपेडी भयो। राति दुई बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ। बिहानै उठ्नुपर्छ। निकै धपेडी छ। त्यसकारण उहाँका निकटस्थले पनि केही दिन देशबाहिर गएर आराम गर्न सुझाव दिएका छन्’, डा. सिंहले भनिन्, ‘हामीले पनि आराम गर्न सुझाएका छौं। सिंगापुरमा उहाँको स्वास्थ परीक्षणसमेत हुनेछ।’ प्रधानमन्त्रीसँगै डा। सिंह पनि सिंगापुर जानेछन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँ गराएका परीक्षणको रिपोर्ट र औषधिको विषयमा सिंगापुरमा थप परामर्श गरिनेछ,’ सिंहले भनिन।
‘दैनिक कार्यसम्पादनमा धपेडी भयो। राति दुई बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ। बिहानै उठ्नुपर्छ। निकै धपेडी छ। त्यसकारण उहाँका निकटस्थले पनि केही दिन देशबाहिर गएर आराम गर्न सुझाव दिएका छन्’, अर्का निजी चिकित्सक डा। दिलीप शर्माले प्रधानमन्त्री ओली नियमित जाँचका लागि सिंगापुर जाने भएकाले मेडिकल बोर्डको सिफारिस नचाहिने बताए। ‘नयाँ केही कुरा होइन। नियमिति जाँचका लागि जाने समय भएकाले आफूहरुले सल्लाह दिएको हो,’ शर्माले भने, ‘त्यसका लागि मेडिकल बोर्डको सिफारिस चाहिँदैन।’
यस्तै मंगलबार मात्रै अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड परिवारसहित दुबई भ्रमणमा निस्किएका छन्। प्रचण्डको दुबई भ्रमण नितान्त पारिवारिक भएको बताइएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकले छापेको छ।
नयाँ पुस्ताले इतिहासको अध्ययन गर्नुपर्छः…
अडियाे प्रकरणबारे सञ्चारमन्त्रीसँग छलफल गर्ने…